सर्वोच्चले स्वास्थ्यसचिवलाई भन्यो- एक साताभित्र छलफलमा आउनू – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर ६ गते २०:२०
सरकारले गरेको सरुवालाई अटेरी गरिरहेकी स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारले दिएको निर्णय पुनर्विचार निवेदन (भ्याकेट)माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एक साताभित्र छलफलका लागि आउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
यसअघि सरकारले उनलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर नै नभई डा. चौधरी सरुवा निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले स्वास्थ्यसचिव सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा काम गर्न दिन १६ कात्तिकमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोलगत्तै चौधरी सीधै स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्किएकी थिइन् ।
सरकारले उक्त सरुवा नितान्त कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको जिकिर गर्दै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा आवश्यकताअनुसार जुनसुकै वेला मन्त्रिपरिषद्ले पद मिल्ने गरी जहाँसुकै जिम्मेवारी तोक्न सक्ने आधारहरुसहित अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएको थियो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दर्ता गराएको निवेदन (भ्याकेट)माथि बिहीबार नै सुनुवाइ भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा–सुविधामा असर नपर्ने गरी सरुवा गर्नु प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम भएको सरकारको दाबी छ ।